Welcome From Ministry of Co-Operative | | Skip to main content
Search ZawgyiOne | Myanmar3 | English သမ၀ါယမဝန်ကြီးရုံး
Minister Update News
12/09 အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း 08/03 ဂုဏ်ပြုနှုတ်ဆက်ပွဲကျင်းပ 07/03 သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ 23/02 စတုထ္ထအကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ရိုးရာထမနဲထိုးပြိုင်ပွဲကျင်... 19/02 "အိုဘယ့်သမဝါယမ" More View မူလစာမျက်နှာ
သမဝါယမ ဦးစီးဌာန အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ဦးစီးဌာန
သမဝါယမ တက္ကသိုလ် (သန်လျင်)
သမဝါယမ တက္ကသိုလ် (စစ်ကိုင်း)
မြန်မာ့ သမဝါယမ၏ ကြော်ငြာများ
ဗဟို သမ၀ါယမအသင်း လီမိတက်
>>ဗဟို သမ၀ါယမအသင်း လီမိတက်
>>ASEAN Centre for the Development of Agricultural
>>အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သမ၀ါယမအဖွဲ့ချုပ် သမ၀ါယမဘဏ်
Ads by Ministry of Co-operative!
Follow Us Our Visitors
Site Counter:334,808Unique Visitor:22,113 update news
အ‌သေးစားစက်မှုလက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပမည့်ရက်များ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း Friday, 28 April, 2017 - 00:00 SSID ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အ‌သေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန ရုံးဝင်းတွင် ကျင်းပသွားမည့် အ‌သေးစားစက်မှုလက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၄) ရက်မှ (၂၅) ရက်နေ့အစား ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၈) ရက်မှ (၂၉) ရက်နေ့များအဖြစ်ြေ... Read More Comment0အ‌သေးစားစက်မှုလက်မှု ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲနှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော် Thursday, 27 April, 2017 - 00:00 SSID အ‌သေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတက်တက်လာစေရေးနှင့် အ‌သေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးကွက်ပိုမိုရရှိစေရေးကို ရည်ရွယ်လျှက် အ‌သေးစားစက်မှုလက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပြပွဲကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၄) ရက်မှ (၂၅)... Read More Comment0အခြေခံစက်ချုပ်သင်တန်း Friday, 30 September, 2016 - 11:07 SSID Read More Comment0၀ါးအခြေခံလက်မှုထည်နည်းပညာသင်တန်း Friday, 30 September, 2016 - 00:00 SSID Read More Comment0Pages123456789…next ›last » Latest news:
၀ါးအခြေခံလက်မှုထည်နည်းပညာသင်တန်း သမ၀ါယမတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း) ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင်နှစ်အတွက် အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်မည့်ရက်၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်မည့်ရက်နှင့် ကျောင်းအပ်လက်ခံမည့်ရက်အား ကြေငြာခြင်း စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း လူသုံးကုန်ပစ္စည်းနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း လူသုံးကုန်နှင့်အလှကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း သမ၀ါယမတက္ကသိုလ်(စစ်ကိုင်း) ပညာသင်နှစ် အသီးသီးရှိ ဒုတိယနှစ်ဝက် စာမေးပွဲများကျင်းပ အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း အခြေခံမော်တော်ဆိုင်ကယ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနည်းသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း Photo Gallery More View Video Gallery
View More အသံ ဖိုင်များ
Copyright © 2014 www.myancoop.gov.mm . All Rights Reserved.